ASUS ZenFone5review: mid-range ထဲမှာ ထူးခြားပါတယ် | Myanmar Mobile App
Home Review/Unboxing ASUS ZenFone5review: mid-range ထဲမှာ ထူးခြားပါတယ်
ASUS ZenFone5review: mid-range ထဲမှာ ထူးခြားပါတယ်
၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ဖုန်းအလုံးရေအနည်းငယ်လောက်ထွက်ရှိအပြီးမှာတော့ ဗြိတိန်ဈေးကွက်ကို ZenFone5နဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ASUS ဟာ ဖုန်းတွေကို အရင်နှစ်တွေကတည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဗြိတိန်ဈေးကွက်ဆိုရင်တော့ first generation ပြီးနောက်မှာ မ၀င်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီးတော့ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာတော့ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပေါက်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဈေးနှုန်းမှန်၊ ပစ္စည်းမှန်နဲ့ ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ZenFone5က ယူကေမှာ ဂျူလိုင်၉ရက်နေ့ကစပြီးတော့ £350 နဲ့ ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ သူဟာ စွမ်းဆောင်ရည်သင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းကလည်း သင့်တင့်ပါတယ်။ ဖုန်းအလုံးရေအတော်များများကို ယှဉ်ပြိုင်နေရတာဖြစ်လို့ AI ကင်မရာနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။
စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက် – ZenFone5က ဈေးနှုန်းလေးလည်းသင့်သလို ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်။ OnePlus6နဲ့တော့ အတော်လေးကွာခြားနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း software support ပိုင်းမှာတော့ ZenFone5က အနိုင်ရထားပါတယ်။
Zenimoji ကတော့ သိပ်မမိုက်တဲ့စိတ်ကူးပါ
notch မကြိုက်ရင်တော့ သတင်းဆိုးပြောရမယ်ထင်တယ်
ဘာကြီးနဲ့တူသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် Android အသုံးပြုထားတဲ့ iPhone X ကြီးလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း iPhone X တောင်မှ ဈေးသက်သာတဲ့ iPhone X ထက် ဈေးချိုပါလိမ့်မယ်။ ယူကေမှာ £350 ပဲဆိုတော့ အလတ်တန်းစား Android စမတ်ဖုန်းလို့ ပြောရမှာပါ။
Hardware နဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Screen – 6.2-inch FHD+ (2246 x 1080) Super IPS+
Chipset – Snapdragon 636
Rear Camera 1 – 12MP, ƒ/1.7
Rear Camera2– 12MP, 120-degree wide-angle
Front Camera – 8MP, ƒ/2.0
Battery – 3300mAh w/ fast charge
Connectivity – Wi-Fi 802.11 ac, BT 5.0
Security – Fingerprint sensor, Face Unlock
Colors – Meteor Silver, Midnight Blue
Dimensions – 153 x 75.6 x 7.7mm
ထင်ရှားတာကတော့ notch ပါနေတဲ့ display ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် 6.2-inch 2246 x 1080 resolution နဲ့ 90% screen-to-body ratio တို့ကတော့ အရှေ့ပိုင်းမှာ နေရာယူထားဦးမှာပါ။ အနားသတ်တွေ ပါးလွှာနေတဲ့ဘေးတွေနဲ့အတူ အောက်မှာထင်းနေတဲ့ ဘောင်လေးကတော့ ရှိနေဦးမှာပါ။
Notch ပါရတော့မယ်ဆိုရင်တောင် ASUS လိုမျိုး လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပါ။ အတော်လေးလှပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက်တော့ ကောင်းလွန်းနေပါပြီ။
Display ကို လျစ်လျူရှုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်လောက်မှာပါ။ ခံ့ညားပါတယ်။ Midnight Blue ကို စမ်းသုံးကြည့်ခဲ့တာပါ။ အရှေ့ဘက်ကတော့ အနက်ရောင်၊ သတ္ထုဖရိန်ကတော့ မှောင်နေပြီး အနက်ရောင်မပေါက်ပါဘူး။ အနောက်ဘက်က glass panel ကလည်း mirrored blue ကို အသုံးပြုပြီး ဆွဲဆောင်ထားသလိုပါပဲ။ display အစွန်းလေးတွေကတော့ ကွေးညွတ်နေပြီးတော့ ဖရိန်ထဲကို သေသေသပ်သပ်ပဲ ၀င်နေပါတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းတင်မထားပါနဲ့။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကနေ မကောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့။
ZenFone4ကတော့ ပိုကြည့်ကောင်းပါတယ်။ iPhone X ခံစားမှုနဲ့ဆိုရင်တော့ ZenFone5ကတော့ မတူခြားနားပါတယ်။ အရှေ့ပိုင်းမှာ display ကို ဦးစားပေးထားပြီးတော့ အနောက်ဘက်မှာ fingerprint sensor ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ASUS ရဲ့ face unlock ကလည်း အားဖြည့်ကူညီပေးထားပါသေးတယ်။
Hardware တွေက ကုန်ကျစရိတ်သိပ်မများဘဲနဲ့ ပရီမီယမ်ဆန်နေပါတယ်။ ASUS ဟာ TPU case လေးကိုထည့်ပေးထားလို့ အနောက်ဘက် Glass Panel ကို ကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ ခံစားမှုလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ZenFone5ရဲ့ အပြင်ပိုင်းကတော့ iPhone 8 Plus ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ မြှောက်ပြောတာ သိသာလွန်းသွားလား။
အတွင်းပိုင်းမှာတော့ ASUS ဟာ Snapdragon 636 CPU ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အရင်ဖုန်းကတော့ Snapdragon 630 ကိုသာ အသုံးပြုထားတာပါ။ သူဟာ 4GB RAM ၊ 64GB မမ်မိုရီကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကဒ်ကိုလည်း စိုက်နိုင်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ASUS က stock Android မဟုတ်ပေမယ့်လည်း နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ZenFone5ကတော့ Pixel2နဲ့ ခံစားမှု၊ သုံးစွဲမှုလေးတွေမှာ ကွဲပြားနေပါတယ်။ အချိ်န်တွေကြာလာတော့ ထူးခြားမှုလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပေမယ့်လည်း ခံစားမှုကိုပျက်ပြားသွားစေတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ Final Fantasy 15 Pocket Edition ကို ဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ထူးခြားနေတဲ့ ဖရိန်ကျော်သွားတာလေးလောက်ကို မမှုဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးလို့ ပြောရမလားပဲ။
gaming performance ကို ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ASUS’ Game Genie လေးရှိပါတယ်။ optimizations လေးတွေကိုလုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ ဂိမ်းကစားနေတဲ့အချိန်မှာ နှောင့်ယှက်မှုတွေကို ၀င်မလာအောင် တားဆီးပေးထားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Game Genie က သင့်ရဲ့ mobile escapades ဒါမှမဟုတ် YouTube မှာကြည့်ထားတာလေးတွေကိုလည်း မှတ်သားထားပေးမှာပါ။
စပီကာလေးတွေကတော့ တောင့်ပါတယ်။ ဂိမ်းဆော့မလား၊ သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုနားထောင်မလား အိုကေပါပဲ။ အရည်အသွေးကတော့ ပြောရလောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်သင့်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဆီက မျှော်မှန်းထားသလောက်ပါပဲ။ အသံကတော့ ကျယ်ပါတယ်။ outdoor mode ဆိုရင် ပိုကျယ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူရှုပ်တဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ ရှိနေရင်တောင် ဖုန်းခေါ်လို့မကြားတာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ASUS ZenFone5Software ကတော့ အရမ်းမိုက်ပါတယ်
ASUS mobile software မှာ ရှုပ်ယှက်တွေခတ်နေတာမျိုးက အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံရမယ်ဆိုရင် ZenFone4ကတော့ လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ZenUI5ကတော့ နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုတစ်ခုပါပဲ။ Google က သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းတွေမှာ လုပ်ဆောင်ပေးသလောက်တောင် ရှိလာပါပြီ။
Launcher အသစ်ကတော့ Pixel launcher ကို နည်းနည်း တုပထားပါတယ်။ အစဉ်လိုက်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းစိတ်ပူစရာလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း settings ထဲမှာ ပြင်လို့လွယ်ပါတယ်။
ASUS ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် app တွေကို အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် contacts တွေကို Google option နဲ့ ပြန်ပြောင်းတာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း built in ပါနေတဲ့ feature လေးတွေက အသုံးဝင်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ Mobile Manager ဆိုရင် ဘတ်ထရီသက်သာစေနိုင်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုလေးတွေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘတ်ထရီကတော့ စိုးရိမ်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ 3300mAh ဆိုတော့ တစ်နေ့တာအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
ASUS နဲ့ Google ကို နည်းနည်းလေး mix လုပ်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ stock SMS app က Google ဖြစ်ပြီးတော့ Google Calendar က default calendar application ဖြစ်ပါတယ်။ ASUS ကတော့ dialer, calculator နဲ့ weather apps တို့ကိုလုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Zen UI ကတော့ အရောင်စုံနေပါတယ်။ stock theme မှာ အဖြူရောင်နောက်ခံနဲ့ ရောင်စုံအိုင်ကွန်လေးတွေကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ launcher ကတော့ တောက်တောက်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ASUS ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် vivid ဒီဇိုင်းမဖြစ်တာများပါတယ်။ မျက်လုံးကို တော်တော်လေးဖြန့်ကျက်ကြည့်ရမှာပါ။
Software ကလည်း notch ကို အဓိကထားတဲ့ feature လေးတွေလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖျောက်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ထိပ်ပိုင်းလေးတွေက အနက်လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ standard status bar ကို တုပထားသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ notch မကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တာမို့ ဖျောက်ထားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လည်း ထူးဆန်းနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ လက်ခံလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။
အောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်း software buttons လေးတွေကို ဖျောက်ထားနိုင်ပြီးတော့ app တွေကို ချဲ့လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း app အများစုက notch display ကို အပြည့်အ၀မထောက်ပံ့ထားသေးတော့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး အဆင်ပြေသလို ကပ်နိုင်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာ သတိမထားမိပေမယ့်လည်း ပုံမှန် aspect ratio နဲ့ပြနိုင်အောင် ဘေးသားလေးတွေ ပြတ်နေမှာပါ။
ခံစားရတာကတော့ ASUS ဟာ ဒီဖုန်းမှာ display အမျိုးအစားကို အရေးပေးမထားဘူးလို့ပါ။ ဘတ်ထရီရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် status bar က ထောင့်လုံးလေးနဲ့ အဆင်မပြေသလိုပါပဲ။
အဆင်မပြေတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ZenFone5software experience ပါပဲ။ ပထမတစ်ခုကတော့ Zenimoji ပါ။ သူကတေ့ Apple ရဲ့ Animoji နဲ့ ဆင်တူပေမယ့်လည်း ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ထားခြင်းနည်းပါတယ်။ iPhone ကို MS နဲ့ ပို့ကြည့်တဲ့အခါ iPhone က ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်ဖုန်းမှားတယ်ဆိုတာ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သုံးလို့မရတာကတော့ ဆိုးရွားလွန်းပါတယ်။ ZenFone5မှာ သိမ်းလိုက်တဲ့ Zenimoji ဟာ အရည်အသွေးနည်းပါးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် မသုံးတာကောင်းပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ASUS ရဲ့ update စနစ်ပါပဲ။ ZenFone5သုံးနေတုန်းမှာ pre-release update လေးခုလောက်တောင် ရခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ Zenimoji ထည့်သွင်းပေးတာပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ May security update ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖုန်းကတော့ Android 8.0. Oreo ပါပဲ။ security patch နောက်ဆုံးကတော့ ကျန်ရစ်နေတုန်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ASUS ZenFone5ရဲ့ AI ကင်မရာ
AI ဆိုတာကတော့ စမတ်ဖုန်းနယ်ပယ်မှာ ခေတ်ထနေတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ လူုတိုင်းက AI ကိုဖုန်းထဲကို မရမကထည့်သွင်းနေကြပါတယ်။ ASUS ကလည်း Huawei လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် စမတ်ဖြစ်ပြီး သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ AI ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
သီအိုရီပိုင်းအရဆိုရင်တော့ အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တကယ်သုံးနိုင်တာမျိုး၊ မားကတ်တင်းပိုင်းအရ ဆွဲဆောင်နိုင်တာမျိုး လိုချင်မိပါတယ်။ အခြေခံအရတော့ AI ကင်မရာက သင်ရိုက်နေတဲ့ scene ကို သိရှိနိုင်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ဖြစ်အောင် setting တွေကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးသွားမှာပါ။ ဒါလေးကတော့ portrait mode ကို အားဖြည့်ပေးထားတဲ့အစွမ်းလေးလို့ပြောရမှာပါ။ သင့်ရဲ့ခွေးကိုတောင် သိနိုင်ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ ZenFone5က သင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဘယ်လိုရိုက်လေ့ရှိကြောင်း ဘယ်လိုတွေချိန်ညှိလေ့ရှိကြောင်း နားလည်လာမှာပါ။ ရလဒ်ကတော့ အရမ်းမိုက်တဲ့ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hardware ပိုင်းအရဆိုရင်တော့ အနောက်ကင်မရာမှာ 12MP sensor တွေကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ main shooter မှာ Sony’s IMX363 ၊ aperture ƒ/1.7 ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ secondary camera ကတော့ 120-degree wide-angle shot ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချက်လေးနဲ့ ကင်မရာက ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
အရှေ့ဘက်မှာတော့ 8MP ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ ဆယ်လ်ဖီကြိုက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ASUS SelfieMaster application လေးကလည်း သင့်ကိုကူညီပေးဦးမှာပါ။ ကျွန်တော့အတွက် အသုံးမ၀င်ပေမယ့်လည်း သူလုပ်ပေးနိုင်တာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
main app ကတော့ အတော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ Google Lens သုံးဖို့အတွက် တစ်ချက်လောက်ပဲထိရမှာပါ။ အရမ်းမိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ creative filter အပုံလိုက်၊ shooting mode တွေထဲမှာ super-resolution ၊ panorama တို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ robust pro mode ကလည်း သင့်စိတ်ကြိုက်တိုင်းကျ ချိန်ညှိလို့ရမှာပါ။
ASUS က ကင်မရာပိုင်းမှာ အတော်လေးအသားပေးပြီးတော့ ရောင်းနေခဲ့တာပါ။ ZenFone2launch ကတည်းက စတင်ခဲ့တာလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ဒီတော့ စွမ်းဆောင်ရည်သင့်စမတ်ဖုန်းကို ရိုက်ချက်အမိုက်စားတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့
ASUS ZenFone5က ၀ယ်သင့်လား
ZenFone4တုန်းကတော့ ဈေးနှုန်းကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်။ ယူကေမှာက ပြိုင်ဘက်ဖုန်းတွေထက် ဈေးများနေတာကိုး။ ZenFone5ကတော့ အရင်ထက် £100 နည်းတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
£350 တန်ကြေးနဲ့ အကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာကောင်းကောင်း၊ ခံ့ညားပြီး ပရီမီယမ်ဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံး၊ ဘတ်ထရီအားမိုက်မိုက်၊ display လန်းလန်းကို တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ။ ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးပါပဲ။ July 8 မတိုင်ခင် အော်ဒါမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့ £300 နဲ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ASUS က ယူကေဈေးကွက်ကို ပြန်လည်နေရာယူတော့မယ့်ဟန်ရှိနေပါတယ်။ Tango-fitted ZenFone AR ၊ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ ZenFone4တို့နဲ့ ပြန်လာခဲ့သလိုပေါ့။ 2018 အတွက်ကတော့ ဈေးမှန်၊ ပစ္စည်းမှန်နဲ့ ဈေးကွက်ဖောက်မှာပါ။
ယှဉ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာကတော့ ပြောနေစရာမလိုလောက်ပါဘူး။ Honor 10 ကလည်း ဈေးသိပ်မကြီးပါဘူး။ Nokia7Plus ကလည်း အဲဒီဈေးလောက်ပါပဲ။ Android One ပါနေတာက အားသာချက်ပါပဲ။ အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ASUS ကသာ software update ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်မှာပါ။
တစ်ခုတည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ZenFone5က တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်သင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ASUS ဖုန်းတွေထဲမှာ အတော်လေးတိုးတက်ကေင်းမွန်ပြီးတော့ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ Zenimoji ကလွဲရင် အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။
၂၀၁၇ခုနှဈမှာ ဖုနျးအလုံးရအေနညျးငယျလောကျထှကျရှိအပွီးမှာတော့ ဗွိတိနျဈေးကှကျကို ZenFone5နဲ့ ပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ASUS ဟာ ဖုနျးတှကေို အရငျနှဈတှကေတညျးက ထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပမေယျ့လညျး ဗွိတိနျဈေးကှကျဆိုရငျတော့ first generation ပွီးနောကျမှာ မဝငျနိုငျတော့ပါဘူး။ ၂၀၁၇ခုနှဈမှာ ပွနျလညျရောကျရှိသှားပွီးတော့ ၂၀၁၈ခုနှဈမှာတော့ နောကျတဈကွိမျထပျပေါကျပါလိမျ့ဦးမယျ။ ဈေးနှုနျးမှနျ၊ ပစ်စညျးမှနျနဲ့ ရောကျရှိလာတာဖွဈပါတယျ။
ZenFone5က ယူကမှော ဂြူလိုငျ၉ရကျနကေ့စပွီးတော့ £350 နဲ့ ရောငျးခပြေးနပေါပွီ။ သူဟာ စှမျးဆောငျရညျသငျ့အမြိုးအစားဖွဈပွီးတော့ ဈေးနှုနျးကလညျး သငျ့တငျ့ပါတယျ။ ဖုနျးအလုံးရအေတျောမြားမြားကို ယှဉျပွိုငျနရေတာဖွဈလို့ AI ကငျမရာနဲ့ ဆှဲဆောငျထားပါတယျ။
စဉျးစားသငျ့တဲ့အခကျြ – ZenFone5က ဈေးနှုနျးလေးလညျးသငျ့သလို ဆှဲဆောငျမှုလညျးရှိပါတယျ။ OnePlus6နဲ့တော့ အတျောလေးကှာခွားနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး software support ပိုငျးမှာတော့ ZenFone5က အနိုငျရထားပါတယျ။
• ကွညျ့ကောငျးတဲ့ display
• Zenimoji ကတော့ သိပျမမိုကျတဲ့စိတျကူးပါ
• notch မကွိုကျရငျတော့ သတငျးဆိုးပွောရမယျထငျတယျ
ဘာကွီးနဲ့တူသလဲဆိုတာစဉျးစားကွညျ့လိုကျရငျ Android အသုံးပွုထားတဲ့ iPhone X ကွီးလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့လညျး iPhone X တောငျမှ ဈေးသကျသာတဲ့ iPhone X ထကျ ဈေးခြိုပါလိမျ့မယျ။ ယူကမှော £350 ပဲဆိုတော့ အလတျတနျးစား Android စမတျဖုနျးလို့ ပွောရမှာပါ။
Hardware နဲ့ အခကျြအလကျလေးတှကေို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
ထငျရှားတာကတော့ notch ပါနတေဲ့ display ပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ 6.2-inch 2246 x 1080 resolution နဲ့ 90% screen-to-body ratio တို့ကတော့ အရှပေို့ငျးမှာ နရောယူထားဦးမှာပါ။ အနားသတျတှေ ပါးလှာနတေဲ့ဘေးတှနေဲ့အတူ အောကျမှာထငျးနတေဲ့ ဘောငျလေးကတော့ ရှိနဦေးမှာပါ။
Notch ပါရတော့မယျဆိုရငျတောငျ ASUS လိုမြိုး လုပျသငျ့တာကို လုပျပါ။ အတျောလေးလှပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျသငျ့စမတျဖုနျးအတှကျတော့ ကောငျးလှနျးနပေါပွီ။
Display ကို လဈြလြူရှုထားလိုကျမယျဆိုရငျတော့ အနောကျဘကျဒီဇိုငျးကို ကွိုကျနှဈသကျလောကျမှာပါ။ ခံ့ညားပါတယျ။ Midnight Blue ကို စမျးသုံးကွညျ့ခဲ့တာပါ။ အရှဘေ့ကျကတော့ အနကျရောငျ၊ သတ်ထုဖရိနျကတော့ မှောငျနပွေီး အနကျရောငျမပေါကျပါဘူး။ အနောကျဘကျက glass panel ကလညျး mirrored blue ကို အသုံးပွုပွီး ဆှဲဆောငျထားသလိုပါပဲ။ display အစှနျးလေးတှကေတော့ ကှေးညှတျနပွေီးတော့ ဖရိနျထဲကို သသေသေပျသပျပဲ ဝငျနပေါတယျ။
စားပှဲပျေါမှာ ဒီအတိုငျးတငျမထားပါနဲ့။ ကွမျးပွငျပျေါကနေ မကောကျခငျြဘူးဆိုရငျပေါ့။
ZenFone4ကတော့ ပိုကွညျ့ကောငျးပါတယျ။ iPhone X ခံစားမှုနဲ့ဆိုရငျတော့ ZenFone5ကတော့ မတူခွားနားပါတယျ။ အရှပေို့ငျးမှာ display ကို ဦးစားပေးထားပွီးတော့ အနောကျဘကျမှာ fingerprint sensor ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ASUS ရဲ့ face unlock ကလညျး အားဖွညျ့ကူညီပေးထားပါသေးတယျ။
Hardware တှကေ ကုနျကစြရိတျသိပျမမြားဘဲနဲ့ ပရီမီယမျဆနျနပေါတယျ။ ASUS ဟာ TPU case လေးကိုထညျ့ပေးထားလို့ အနောကျဘကျ Glass Panel ကို ကောငျးကောငျးကာကှယျပေးထားပါတယျ။ ခံစားမှုလညျး ကောငျးမှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ZenFone5ရဲ့ အပွငျပိုငျးကတော့ iPhone 8 Plus ထကျ ပိုကောငျးတယျလို့ ခံစားမိပါတယျ။ မွှောကျပွောတာ သိသာလှနျးသှားလား။
အတှငျးပိုငျးမှာတော့ ASUS ဟာ Snapdragon 636 CPU ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ အရငျဖုနျးကတော့ Snapdragon 630 ကိုသာ အသုံးပွုထားတာပါ။ သူဟာ 4GB RAM ၊ 64GB မမျမိုရီကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ကဒျကိုလညျး စိုကျနိုငျပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျကတော့ ကောငျးမှနျပါတယျ။ ASUS က stock Android မဟုတျပမေယျ့လညျး နစေ့ဉျအသုံးပွုမှုအတှကျကတော့ အဆငျပွပေါတယျ။
ZenFone5ကတော့ Pixel2နဲ့ ခံစားမှု၊ သုံးစှဲမှုလေးတှမှော ကှဲပွားနပေါတယျ။ အခြိနျတှကွောလာတော့ ထူးခွားမှုလေးတှေ ဖွဈတတျပမေယျ့လညျး ခံစားမှုကိုပကျြပွားသှားစတောမြိုးတော့ မရှိပါဘူး။ Final Fantasy 15 Pocket Edition ကို ဆော့ကွညျ့တဲ့အခါမှာ ကောငျးမှနျပါတယျ။ ထူးခွားနတေဲ့ ဖရိနျကြျောသှားတာလေးလောကျကို မမှုဘူးဆိုရငျတော့ ဖုနျးကောငျးတဈလုံးလို့ ပွောရမလားပဲ။
gaming performance ကို ကောငျးမှနျစဖေို့အတှကျ ASUS’ Game Genie လေးရှိပါတယျ။ optimizations လေးတှကေိုလုပျဆောငျထားပွီးတော့ ဂိမျးကစားနတေဲ့အခြိနျမှာ နှောငျ့ယှကျမှုတှကေို ဝငျမလာအောငျ တားဆီးပေးထားမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ Game Genie က သငျ့ရဲ့ mobile escapades ဒါမှမဟုတျ YouTube မှာကွညျ့ထားတာလေးတှကေိုလညျး မှတျသားထားပေးမှာပါ။
စပီကာလေးတှကေတော့ တောငျ့ပါတယျ။ ဂိမျးဆော့မလား၊ သငျ့ရဲ့အကွိုကျဆုံးသီခငျြးတှကေိုနားထောငျမလား အိုကပေါပဲ။ အရညျအသှေးကတော့ ပွောရလောကျအောငျမဟုတျပါဘူး။ စှမျးဆောငျရညျသငျ့စမတျဖုနျးတဈလုံးဆီက မြှျောမှနျးထားသလောကျပါပဲ။ အသံကတော့ ကယျြပါတယျ။ outdoor mode ဆိုရငျ ပိုကယျြပါတယျ။ ဒီတော့ လူရှုပျတဲ့လမျးတှပေျေါမှာ ရှိနရေငျတောငျ ဖုနျးချေါလို့မကွားတာမြိုး မဖွဈတော့ပါဘူး။
ASUS ZenFone5Software ကတော့ အရမျးမိုကျပါတယျ
ASUS mobile software မှာ ရှုပျယှကျတှခေတျနတောမြိုးက အဆုံးသတျသှားပါပွီ။ ရိုးရိုးသားသားဝနျခံရမယျဆိုရငျ ZenFone4ကတော့ လုပျဆောငျခကျြကောငျးမှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ZenUI5ကတော့ နောကျထပျကွိုးစားမှုတဈခုပါပဲ။ Google က သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျဖုနျးတှမှော လုပျဆောငျပေးသလောကျတောငျ ရှိလာပါပွီ။
Launcher အသဈကတော့ Pixel launcher ကို နညျးနညျး တုပထားပါတယျ။ အစဉျလိုကျမွငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ နညျးနညျးစိတျပူစရာလိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး settings ထဲမှာ ပွငျလို့လှယျပါတယျ။
ASUS ရဲ့ ကိုယျပိုငျ app တှကေို အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ contacts တှကေို Google option နဲ့ ပွနျပွောငျးတာမြိုးပေါ့။ ဒါပမေယျ့လညျး built in ပါနတေဲ့ feature လေးတှကေ အသုံးဝငျတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ Mobile Manager ဆိုရငျ ဘတျထရီသကျသာစနေိုငျတဲ့ ထိနျးခြုပျမှုလေးတှေ ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ ဘတျထရီကတော့ စိုးရိမျစရာမလိုအပျပါဘူး။ 3300mAh ဆိုတော့ တဈနတေ့ာအတှကျ အဆငျပွပေါတယျ။
ASUS နဲ့ Google ကို နညျးနညျးလေး mix လုပျထားတယျလို့ထငျပါတယျ။ ဒါလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ stock SMS app က Google ဖွဈပွီးတော့ Google Calendar က default calendar application ဖွဈပါတယျ။ ASUS ကတော့ dialer, calculator နဲ့ weather apps တို့ကိုလုပျဆောငျထားပါတယျ။
Zen UI ကတော့ အရောငျစုံနပေါတယျ။ stock theme မှာ အဖွူရောငျနောကျခံနဲ့ ရောငျစုံအိုငျကှနျလေးတှကေိုအသုံးပွုထားပွီးတော့ launcher ကတော့ တောကျတောကျလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ASUS ဖုနျးဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ vivid ဒီဇိုငျးမဖွဈတာမြားပါတယျ။ မကျြလုံးကို တျောတျောလေးဖွနျ့ကကျြကွညျ့ရမှာပါ။
Software ကလညျး notch ကို အဓိကထားတဲ့ feature လေးတှလေညျး တှမွေ့ငျရပါတယျ။ မကွိုကျဘူးဆိုရငျတော့ ဖြောကျထားလို့ရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ထိပျပိုငျးလေးတှကေ အနကျလေးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ standard status bar ကို တုပထားသလိုပါပဲ။ ကြှနျတျောကတော့ notch မကွိုကျတဲ့သူဖွဈတာမို့ ဖြောကျထားကွညျ့လိုကျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျလညျး ထူးဆနျးနသေလိုဖွဈနပေါတယျ။ ဒီတော့ လကျခံလိုကျတာပဲ ကောငျးပါတယျ။
အောကျဘကျမှာဆိုရငျလညျး software buttons လေးတှကေို ဖြောကျထားနိုငျပွီးတော့ app တှကေို ခြဲ့လို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး app အမြားစုက notch display ကို အပွညျ့အဝမထောကျပံ့ထားသေးတော့ ခလုတျလေးကိုနှိပျပွီး အဆငျပွသေလို ကပျနိုငျပါတယျ။ ဗှီဒီယိုကွညျ့တဲ့အခါမှာ သတိမထားမိပမေယျ့လညျး ပုံမှနျ aspect ratio နဲ့ပွနိုငျအောငျ ဘေးသားလေးတှေ ပွတျနမှောပါ။
ခံစားရတာကတော့ ASUS ဟာ ဒီဖုနျးမှာ display အမြိုးအစားကို အရေးပေးမထားဘူးလို့ပါ။ ဘတျထရီရာခိုငျနှုနျးကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ status bar က ထောငျ့လုံးလေးနဲ့ အဆငျမပွသေလိုပါပဲ။
အဆငျမပွတောကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ ZenFone5software experience ပါပဲ။ ပထမတဈခုကတော့ Zenimoji ပါ။ သူကတေ့ Apple ရဲ့ Animoji နဲ့ ဆငျတူပမေယျ့လညျး ကောငျးမှနျအောငျလုပျဆောငျထားခွငျးနညျးပါတယျ။ iPhone ကို MS နဲ့ ပို့ကွညျ့တဲ့အခါ iPhone က ဖှငျ့လို့မရပါဘူး။ ဘယျဖုနျးမှားတယျဆိုတာ မပွောခငျြပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး သုံးလို့မရတာကတော့ ဆိုးရှားလှနျးပါတယျ။ ZenFone5မှာ သိမျးလိုကျတဲ့ Zenimoji ဟာ အရညျအသှေးနညျးပါးလှနျးတဲ့အတှကျကွောငျ့ မသုံးတာကောငျးပါလိမျ့မယျ။
နောကျတဈခုကတော့ ASUS ရဲ့ update စနဈပါပဲ။ ZenFone5သုံးနတေုနျးမှာ pre-release update လေးခုလောကျတောငျ ရခဲ့ပါတယျ။ တဈခုကတော့ Zenimoji ထညျ့သှငျးပေးတာပါ။ နောကျဆုံးတဈခုကတော့ May security update ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ဖုနျးကတော့ Android 8.0. Oreo ပါပဲ။ security patch နောကျဆုံးကတော့ ကနျြရဈနတေုနျးပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ကတော့ နောကျပိုငျးမှာ ဘယျလိုတှလေုပျမလဲဆိုတာ ကွညျ့ခငျြပါတယျ။
ASUS ZenFone5ရဲ့ AI ကငျမရာ
AI ဆိုတာကတော့ စမတျဖုနျးနယျပယျမှာ ခတျေထနတေဲ့စကားလုံးဖွဈပွီးတော့ လူုတိုငျးက AI ကိုဖုနျးထဲကို မရမကထညျ့သှငျးနကွေပါတယျ။ ASUS ကလညျး Huawei လိုမြိုး လုပျဆောငျထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ စမတျဖွဈပွီး သငျယူနိုငျစှမျးရှိတဲ့ AI ကို အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။
သီအိုရီပိုငျးအရဆိုရငျတော့ အားသာခကျြတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ တကယျသုံးနိုငျတာမြိုး၊ မားကတျတငျးပိုငျးအရ ဆှဲဆောငျနိုငျတာမြိုး လိုခငျြမိပါတယျ။ အခွခေံအရတော့ AI ကငျမရာက သငျရိုကျနတေဲ့ scene ကို သိရှိနိုငျပွီးတော့ အကောငျးဆုံးရိုကျခကျြဖွဈအောငျ setting တှကေို အလိုအလြောကျခြိနျညှိပေးသှားမှာပါ။ ဒါလေးကတော့ portrait mode ကို အားဖွညျ့ပေးထားတဲ့အစှမျးလေးလို့ပွောရမှာပါ။ သငျ့ရဲ့ခှေးကိုတောငျ သိနိုငျပါတယျ။
အခြိနျကွာလာတဲ့အခြိနျမှာ ZenFone5က သငျ့ရဲ့ပုံရိပျတှကေို ဘယျလိုရိုကျလရှေိ့ကွောငျး ဘယျလိုတှခြေိနျညှိလရှေိ့ကွောငျး နားလညျလာမှာပါ။ ရလဒျကတော့ အရမျးမိုကျတဲ့ပုံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Hardware ပိုငျးအရဆိုရငျတော့ အနောကျကငျမရာမှာ 12MP sensor တှကေို အသုံးပွုထားပွီးတော့ main shooter မှာ Sony’s IMX363 ၊ aperture ƒ/1.7 ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ secondary camera ကတော့ 120-degree wide-angle shot ကို ပေးနိုငျပါတယျ။ တဈခကျြလေးနဲ့ ကငျမရာက ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ။
အရှဘေ့ကျမှာတော့ 8MP ကို အသုံးပွုထားပွီးတော့ ဆယျလျဖီကွိုကျသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ ASUS SelfieMaster application လေးကလညျး သငျ့ကိုကူညီပေးဦးမှာပါ။ ကြှနျတော့အတှကျ အသုံးမဝငျပမေယျ့လညျး သူလုပျပေးနိုငျတာတှေ အမြားကွီးရှိနပေါတယျ။
main app ကတော့ အတျောလေးရိုးရှငျးပါတယျ။ Google Lens သုံးဖို့အတှကျ တဈခကျြလောကျပဲထိရမှာပါ။ အရမျးမိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ creative filter အပုံလိုကျ၊ shooting mode တှထေဲမှာ super-resolution ၊ panorama တို့လညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ robust pro mode ကလညျး သငျ့စိတျကွိုကျတိုငျးကြ ခြိနျညှိလို့ရမှာပါ။
ASUS က ကငျမရာပိုငျးမှာ အတျောလေးအသားပေးပွီးတော့ ရောငျးနခေဲ့တာပါ။ ZenFone2launch ကတညျးက စတငျခဲ့တာလို့ ပွောရမှာပါပဲ။ ဒီတော့ စှမျးဆောငျရညျသငျ့စမတျဖုနျးကို ရိုကျခကျြအမိုကျစားတှအေတှကျ အသုံးပွုနိုငျမယျဆိုရငျတော့
ASUS ZenFone5က ဝယျသငျ့လား
ZenFone4တုနျးကတော့ ဈေးနှုနျးကိုဝဖေနျခဲ့တယျ။ ယူကမှောက ပွိုငျဘကျဖုနျးတှထေကျ ဈေးမြားနတောကိုး။ ZenFone5ကတော့ အရငျထကျ £100 နညျးတယျဆိုတော့ အဆငျပွပေါတယျ။
£350 တနျကွေးနဲ့ အကောငျးတှရေနိုငျပါတယျ။ ကငျမရာကောငျးကောငျး၊ ခံ့ညားပွီး ပရီမီယမျဆနျတဲ့ဖုနျးတဈလုံး၊ ဘတျထရီအားမိုကျမိုကျ၊ display လနျးလနျးကို တှမွေ့ငျခံစားရမှာပါ။ ဖုနျးကောငျးတဈလုံးပါပဲ။ July 8 မတိုငျခငျ အျောဒါမှာထားမယျဆိုရငျတော့ £300 နဲ့ ရမှာဖွဈပါတယျ။
ASUS က ယူကဈေေးကှကျကို ပွနျလညျနရောယူတော့မယျ့ဟနျရှိနပေါတယျ။ Tango-fitted ZenFone AR ၊ ဈေးအရမျးကွီးတဲ့ ZenFone4တို့နဲ့ ပွနျလာခဲ့သလိုပေါ့။ 2018 အတှကျကတော့ ဈေးမှနျ၊ ပစ်စညျးမှနျနဲ့ ဈေးကှကျဖောကျမှာပါ။
ယှဉျပွိုငျရမယျဆိုတာကတော့ ပွောနစေရာမလိုလောကျပါဘူး။ Honor 10 ကလညျး ဈေးသိပျမကွီးပါဘူး။ Nokia7Plus ကလညျး အဲဒီဈေးလောကျပါပဲ။ Android One ပါနတောက အားသာခကျြပါပဲ။ အဆိုးကွီးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ASUS ကသာ software update ကောငျးမယျဆိုရငျတော့ အဆငျပွလေောကျမှာပါ။
တဈခုတညျးစဉျးစားမယျဆိုရငျတော့ ZenFone5က တကယျ့ကိုကောငျးမှနျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျသငျ့ စမတျဖုနျးတဈလုံး ဖွဈပါတယျ။ ASUS ဖုနျးတှထေဲမှာ အတျောလေးတိုးတကျကငျေးမှနျပွီးတော့ သုံးရတာလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ Zenimoji ကလှဲရငျ အဆငျပွတေယျလို့ ပွောရမှာပါပဲ။
Previous article2018 မှာဝယ်သင့်တဲ့ iPhone X Case ကောင်းကောင်းလေးတွေ
Next articleသင့်ဖုန်းထဲမှာရှိပေမဲ့ သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ feauture များ